AMBALABE TOAMASINA : Vehivavy iray tratran’ny fokonolona nangalatra sy namaky trano
Araka ny efa ambara matetika, dia tsy mifidy fotoana fanafihana ireo olon-dratsy. Tao Ambalabe ny talata lasa teo, dia tao anatin’ny 30 mn monja no nahavitan’ny jiolahy namaky tokantrano iray. 23 mai 2019
Lasa tamin’izany ny écran plat, lecteur DVD sy kojakoja maromaro. Nanasa lamba teo an-tokotany ny tompon-trano. Tsy nihidy ny trano ka niditra moramora ireo jiolahy.
Natao ny fanarahan-dia. Tsy lasa lavitra dia voasambotra ny vehivavy iray. Niaiky ity farany fa izy sy ny vadiny no nanao ilay halatra. Tamin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra (alarobia antoandro) dia mbola karohina ilay rangahy vadiny. Misy ampahany tamin’ireo entana no efa tafaverina soa aman-tsara amin’ny tompony.
Momba izay famakian-trano izay hatrany.
Ny 19 mey teo tao Vohitsara, tranga tsy dia fahita loatra ao Toamasina no niseho. Nandeha niasa ny tompon-trano tamin’ny 8 ora sy sasany maraina ary tsy niverina raha tsy tamin’ny 4 ora sy sasany hariva. Akory ny hatairany fa ny trano tsy vaky avy any ivelany fa ny entana tao anatiny kosa nikorontana ambony ambany ary nisokatra ny efitra rehetra. Nahandro sakafo ilay mpangalatra. Raha ny fahitana ny tao an-trano, dia nampiasa fatana gaz mihitsy nahandro ny hena sy ny akoho avy tao anaty vata fampangatsiahana. Nihinana soa aman-tsara, nampiasa fitaovam-pihinanana toy ny sotro, antsy, sotro rovitra. Navelany teo ny lovia avy nihinanany. Vary tapa-gony sy vera ary tablette no nalainy fa ny ankoatr’izay tsy nisy nokitihiny.